XOG:Musharaxiinta P/land oo labo garab u kala jabay & C/weli Gaas oo Gaashaan Buur hor leh samaystay kadib markii….. – Puntlandtimes
XOG:Musharaxiinta P/land oo labo garab u kala jabay & C/weli Gaas oo Gaashaan Buur hor leh samaystay kadib markii…..
January 4, 2019 Puntland PL
GAROWE(P-TIMES)- Kadib markii maanta doorasho ka dhacday Hoolka Baarlamaanka Puntland lagu doortay gudoomiyaha cusub ee Baarlamaanka Puntland iyo labadiisa ku xigeen ayaa waxaa gudaha magaalada Garowe durbaba ka bilaabantay xiisadaha doorashada madaxtinimada Puntland.
Musharaxiinta loolanka adag haatan ugu jira qabashada xilka madaxweynaha ayaa iyagu u kala jabay labo garab kuwaas oo kala ah musharaxiin ciidan iyo kuwo kale oo caadi ah.
Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas oo markii hore bilaa garab ayaa haatan haysta kalsoonida musharax badan oo afkaar ahaan kasoo hor jeeda musharaxiinta ciidamada ah.
Xulafadani ayaa u muuqda kuwo ka turjumaya ciidamada difaaca Puntland iyo shacabka maadaama badankood ay yihiin Dal Joog halka musharaxiinta Qurba Joogta ahna ay muuqdaan kuwo isku garab ah, waxaase xusid mudan in Dr. Cali Ciise Cabdi oo kamid ah musharaxiintaasi in weli uusan la safan labada dhinac midnaba.
Xiisadaha doorashada Puntland ayaa cirka isku sii shareerayey maalmihii ugu dambeeyey, waxaana musharaxiintu u muuqdaan xiligani kuwo dagaal ka dhex qarxi doono maadaama labo garab ay u kala safteen xiligani.
Wararka doorashada Puntland halkan kala soco oo riix meeshan